Kabọn—Nkume Dị́ Ịtụnanya
GỤỌ NKE Afrikaans Albanian Amharic Arabic Armenian Azerbaijani Azerbaijani (Cyrillic) Bengali Bislama Bulgarian Catalan Cebuano Chichewa Chinese Cantonese (Simplified) Chinese Cantonese (Traditional) Chinese Mandarin (Simplified) Chinese Mandarin (Traditional) Chitonga Chitumbuka Chiyao Cibemba Croatian Czech Danish Dutch Efik English Estonian Ewe Fijian Finnish French Georgian German Greek Gujarati Hebrew Hiligaynon Hindi Hungarian Icelandic Igbo Iloko Indonesian Italian Japanese Kannada Kazakh Kikaonde Kinyarwanda Kirghiz Kirundi Korean Latvian Lingala Lithuanian Luganda Luvale Macedonian Malagasy Malayalam Maltese Marathi Myanmar Ndebele (Zimbabwe) Nepali Norwegian Oromo Pangasinan Polish Portuguese Punjabi Romanian Russian Samoan Sepedi Serbian Serbian (Roman) Sesotho (Lesotho) Setswana Shona Silozi Sinhala Slovak Slovenian Spanish Swahili Swahili (Congo) Swedish Tagalog Tamil Tatar Telugu Tetun Dili Thai Tigrinya Tok Pisin Tsonga Turkish Twi Ukrainian Urdu Vietnamese Waray-Waray Xhosa Yoruba Zulu
Otu akwụkwọ a na-akpọ Nature’s Building Blocks kwuru, sị: ‘Kabọn bara uru ná ndụ karịa ihe ọ bụla ọzọ.’ Otú kabọn dị na-eme ka ọ dị mfe ya na ihe ndị ọzọ ịgwakọta. Ọ bụ ya mere e ji nwee ọtụtụ ihe kabọn dị n’ime ya. A na-achọpụtakwa ọtụtụ ihe ọhụrụ ndị ọ dị na ha, na-ejikwa ya emepụta ọtụtụ ihe.
Ihe ndị a kọwara n’okpuru ebe a gosiri na irighiri kabọn nwekwara ike ịhazi onwe ha n’ụzọ dị iche iche. Ha nwere ike ịdị ogologo, gburugburu ma ọ bụkwanụ mbadamba. N’eziokwu, kabọn dị ịtụnanya.
Ụmụ irighiri kabọn nwere otú ha nwere ike isi hazie onwe ha, ha esie ezigbo ike ghọzie dayamọnd. Dayamọnd bụ ihe kacha sie ike a chọpụtarala n’ụwa. Ezigbo dayamọnd na-enwe otu mọlekụl kabọn.
Ọ bụrụ na ụmụ irighiri kabọn ahazie onwe ha ka ha dịrị mbadamba mbadamba, nke ọ bụla adịrị n’elu ibe ya, ọ na-aghọ grafaịt. A na-eji grafaịt emepụta mmanụ a na-atụ n’ígwè ọrụ, jirikwa ya emepụta pensụl.
Ọ bụrụ na ụmụ irighiri kabọn ahazie onwe ha ka ha dị mbadamba, nwee akụkụ isii, ọ na-aghọ grafịn. Grafịn na-esi ezigbo ike karịa ígwè. A dọtịa grafịn na ígwè, ígwè na-ebu grafịn ụzọ adọbi. E jiri pensụl kaa ihe, ihe ahụ akara nwere ike inwe grafịn ole na ole n’ime ya.
Ihe a bụ mọlekụl kabọn ndị nwere oghere n’ime ha. Ụfọdụ n’ime ha dị gburugburu, ndị ọzọ adịrị ogologo.
IHE NDỊ DỊ NDỤ
Kabọn dị ná mkpụrụ ndụ dị n’ime ihe niile dị ndụ, ma osisi, ma ụmụ anụmanụ ma ụmụ mmadụ. Kabọn dịkwa ná nri dị iche iche anyị na-eri.
“Àgwà [Chineke] ndị a na-apụghị ịhụ anya ka a na-ahụ . . . n’ihe ndị e kere eke.”—Ndị Rom 1:20.
Ụzọ Dị Ịtụnanya Kpakpando Si Emepụta Kabọn
Ndị sayensị kwuru na irighiri helium atọ na-agwakọta ghọọ kabọn n’ime kpakpando ndị a na-akpọ red giants. Tupu helium enwee ike ịgwakọta, ihe ụfọdụ ga-adịrịrị otú ha kwesịrị ịdị. Otu onye sayensị aha ya bụ Paul Davies kwuru, sị: ‘A gbanwee ihe ọ bụla n’otú ihe ndị ahụ kwesịrị ịdị, ọ bụrụgodị obere ihe, o nweghịzị ihe ga-adị ndụ, eluigwe na ụwa agaghịkwa adị.’ Olee ihe ị ga-asị mere ihe ndị a ji dị nnọọ otú ha kwesịrị ịdị? Ụfọdụ ndị sịrị na ha ji aka ha dịrị otú ahụ, ndị ọzọ a sị na ọ na-egosi na e nwere Onye Okike. Olee nke dị gị ka ọ̀ bụ eziokwu?
Zigara Ya Onye Ọzọ Zigara Ya Onye Ọzọ Nkume Dị́ Ịtụnanya
IHE NDỊ NA-EME N’ỤWA Akụkọ Gbasara Amerịka na Mba Ndị Gbara Ya Gburugburu
IHE BAỊBỤL KWURU Na-ekele Ndị Meere Gị Ihe Ọma
IHE GBASARA NDỊ OGE OCHIE Aristotle
Ụdị Dị Iche Iche Họrọ ụdị nke ị ga-ewere TETA! Jizọs Ọ̀ Bụ Mmadụ Dịrị Ndụ n’Ụwa A?
Zigara Ya Onye Ọzọ Zigara Ya Onye Ọzọ TETA! Jizọs Ọ̀ Bụ Mmadụ Dịrị Ndụ n’Ụwa A?
TETA! Jizọs Ọ̀ Bụ Mmadụ Dịrị Ndụ n’Ụwa A?